▷ टोकियो २०२० ओलम्पिक खेलहरू नि: शुल्क कसरी हेर्ने Androidsis
आरोन रिवास | 15/07/2021 09:32 | हाम्रो बारेमा
को ओलम्पिक खेल टोकियो २०२० तिनीहरू केवल कुनाको वरिपरि छन् र यस महान खेल घटनाको वरिपरिका अपेक्षाहरू उच्च छन्। र यो त्यो हो कि केहि दिनको कुरा हो भने, तिनीहरू जापानमा हुनेछन्, सबै कुराको साथ कि यस्तो महत्त्व र परिमाणको समारोहमा समावेश हुन्छ।
हजारौं एथलीटहरू र खेलकुदहरू सहभागी हुनेछन्, दर्जनौं देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै र तिनीहरूको झण्डा माथि छोड्नेछन्। स्पेन पहिले नै यसको आफ्नै तयार छ, त्यसैले हामी यस वर्ष राम्रो परिणाम आशा गर्न सक्छौं। यदि तपाईं टोकियो २०२० ओलम्पिक खेल नि: शुल्क हेर्न चाहानुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई कसरी बताउँछौं।
1 तिनीहरू कहिले सुरू हुन्छन् र कहिले अन्त हुन्छन्?
2 त्यसोभए तपाईं टोकियो २०२० ओलम्पिक खेल नि: शुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ
3 टोकियो २०२० ओलम्पिक हेर्नका लागि अन्य विकल्पहरू
3.0.1 RTVE (स्पेनिश रेडियो र टेलिभिजन)
4 ओलम्पिकमा स्पेन
4.1 स्पेनले भाग लिने खेल र अनुशासन
4.2 अघिल्लो ओलम्पिकमा स्पेनले कसरी राम्रो प्रदर्शन गर्यो
5 टोकियो २०२० ओलम्पिकमा भाग लिने महान स्पानिश खेलाडीहरू
6 ओलम्पिकमा new नयाँ खेल थपिएको छ
तिनीहरू कहिले सुरू हुन्छन् र कहिले अन्त हुन्छन्?
टोकियो ओलम्पिक यो वर्ष २ 24 जुलाई र अगस्ट between बीच भएको थियो, जुन अन्तिममा हकदार भएको थियो। यद्यपि महामारीको कारण, आयोजक समितिले यसलाई हालसम्म स्थगित गर्नुपर्‍यो किनभने यी गतिविधिहरूको विकासका लागि विश्वव्यापी रूपमा राम्रो अवस्था रहेको छ। अब यी तिनीहरू जुलाई २rd देखि सुरु हुनेछ र August अगस्तमा समाप्त हुन्छन्। त्यो सबै समयमा, दर्जनौं खेलकुद र एथलेटिक प्रतियोगिताहरू हुनेछन्, र स्पेन, अन्य धेरै देशहरू जस्तै, यी मध्ये धेरैमा उपस्थित हुनेछन्।
🥇 नि: शुल्क महिना कोशिस गर्नुहोस्: ओलम्पिकबाट केहि पनि नछुटाउनुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं सबै परीक्षणहरू र धेरै अनन्य खेलहरू (एफ 1, बास्केटबल, फुटबल ...) कुनै प्रकारको प्रतिबद्धता बिना देख्न सक्नुहुनेछ।
हो, पछिल्ला अवसरहरूमा यस कार्यक्रमको दर्शक हुने छैन, केहि कुराले देखाउँदछ कि COVID-१ by को कारणका समस्याहरू आज पनि अस्तित्वमा छन्, यद्यपि उनीहरूले संसारमा पहिलेदेखि नै उपलब्ध भ्याक्सिन र संक्रापलाई घटाएको अन्य कारकहरूको कारण धन्यवाद कम भएको छ।
त्यसोभए तपाईं टोकियो २०२० ओलम्पिक खेल नि: शुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ
टोकियो २०२० ओलम्पिक हेर्नका लागि धेरै तरिकाहरू छन्। यद्यपि धेरै बहुमतहरू निश्चित छन्। धेरै थोरै नि: शुल्क छन् र एकै साथ राम्रो गुणको पनि छन्।
उत्तम विकल्प DAZN मार्फत हो, जुन भुक्तान गरिएको हो, तर स्थायित्व बिना नि: शुल्क परीक्षण महिना प्रदान गर्दछ, जुन सजिलैसँग कुनै पनि समयमा रद्द गर्न सकिन्छ, भुक्तानी गर्नबाट बच्नको लागि।
यस मार्फत घटना प्रसारण गरिनेछ। एउटै समयमा, विश्वका अन्य खेल र लिगहरू पनि प्रसारण हुन्छन्, त्यसैले यो खेल, एथलीटहरु र टोकियो २०२० ओलम्पिक खेलको शाखाहरु को दुनिया मा हुने सबै केहि को बारे मा सूचित रहन उत्तम छ, साथै सबै भन्दा महत्वपूर्ण बक्सिंग झगडा, फुटबल लीग। सबैभन्दा लोकप्रिय (कोपा डेल रे, प्रीमियर लीग, आदि), बास्केटबल लीगहरू, असंख्य वृत्तचित्रहरू, साप्ताहिक कार्यक्रमहरू र अधिक।
भुक्तानी विधिहरू सबै भन्दा लोकप्रिय बीचमा छन्। तपाइँ तपाइँको क्रेडिट वा डेबिट कार्ड भिसा, मास्टरकार्ड, JBC वा अमेरिकी एक्सप्रेस को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि Paypal, गुगल भुक्तानी, एप्पल मार्फत भुक्तानी वा DAZN गिफ्ट कार्ड को उपयोग को लागी अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
मासिक सदस्यता मूल्य 9,99 .99,99। युरो हो। यदि तपाइँ एक बर्षको लागि DAZN सम्झौता गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ 8,33 XNUMX..XNUMX युरो को भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, जसले मासिक भुक्तानी लाई XNUMX..XNUMX युरोमा अनुवाद गर्दछ।
टोकियो २०२० ओलम्पिक हेर्नका लागि अन्य विकल्पहरू
जबकि DAZN टोक्यो २०२० ओलम्पिक खेलहरू हेर्न मनपर्ने विकल्पहरू मध्ये एक हो, त्यहाँ अरू पनि धेरै छन् जुन प्रशस्त राम्रो हुन सक्छ।
RTVE (स्पेनिश रेडियो र टेलिभिजन)
पहिलो ठाउँमा हामीसँग RTVE (स्पेनिश रेडियो टेलिभिजन) छ, यी ओलम्पिकमा हुने ठाउँ र समारोह धेरै देख्नको लागि देशको एक मुख्य साधन। यो नि: शुल्क हो र यसले उद्घाटन र उद्घाटन समारोहको साथै धेरै खेलहरू, अनुशासनहरू, र एथलेटिक गतिविधिहरू कभर हुनेछ जुन कार्यक्रममा हुनेछ।
मोभिस्टार अर्को मिडिया हो जसले स्पेनको लागि खेल कार्यक्रमहरू कभर गर्दछ। यो त्यस कारणले हो यो खेलको स्तरमा हुने सबै कुरा हेर्नको लागि अर्को राम्रो विकल्प होओलम्पिक खेलहरूमा मात्र होइन, अन्य कार्यक्रमहरूमा साथै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल, व्यावसायिक बास्केटबल लिगहरू र अन्य थुप्रै खेलहरूमा पनि।
त्यहाँ भोडाफोन पनि छ, जसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई यूरोस्पोर्ट प्लेयर प्रदान गर्दछ २०२० ओलम्पिक हेर्ने सम्भावना। यस विकल्पको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि यसमा दुईवटा च्यानलहरू छन्, जुन यूरोसपोर्ट १ र यूरोसपोर्ट २ हो, त्यसैले तपाईं व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि खेल कार्यक्रमलाई नछुटाउनुहोस्, स्पेनमा भाग लिन छोड्नुहोस्।
ओलम्पिक.कम हो ओलम्पिक कभर गर्ने मुख्य वेब प्लेटफर्म मध्ये एक, समाचार देखि जिज्ञासा र, निश्चित रूपमा, प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष खेलहरू। असंख्य छविहरू, भिडियोहरू र अधिक पनि यो वेब पृष्ठमा प्रदर्शित हुन्छन्। ओलम्पिक अनुसरण गर्न यो अर्को राम्रो विकल्प हो। यस संस्करण को।
🥇 नि: शुल्क महिना कोशिस गर्नुहोस् DAZN र 2021 टोक्यो ओलम्पिकबाट केहि पनि नछुटाउनुहोस्
२०० भन्दा बढी देशहरू यस ओलम्पिक संस्करणमा sports२200 खेल शाखाहरूका 306०42 कार्यक्रमहरूमा भाग लिने छन्। स्पेन, हरेक बर्ष जस्तै, कुल 321२१ एथलीटहरू र एथलीटहरूको साथ उपस्थित हुनेछजसमध्ये १184 पुरुष र १137 महिला हुन्। टोक्यो २०२० ओलम्पिक खेलको उद्घाटन कार्यक्रममा पेशेवर क्र्यामर मिरिया बेलमोन्टका साथ सेल क्र्याभियोटो देशको झण्डा बोक्ने छन्।
सेल क्र्याभियोट्टो र मिरेया बेलमोन्ट स्पेनिश एथलीटहरू हुन् जसलाई धेरै पुरस्कार र अनुभव हुन्छ। त्यसकारण तिनीहरूलाई कार्यक्रममा झण्डा प्रतिनिधित्व गर्न छनौट गरिएको थियो। दुबैले अघिल्लो ओलम्पिक खेलहरूमा धेरै पदकहरू जित्न सफल भएका छन्। र यो यो हो कि ओलम्पिक खेलका सबै विगत संस्करणहरूमा पहिलोले भाग लिएको छ, २०० 2008 पछि, जुन बेइजि,, चीनमा आयोजना गरिएको थियो।
बेलमोन्टको तर्फबाट, उनले धेरै ओलम्पिक संस्करणहरूमा पनि भाग लिइन्, तर २०० 2008 मा होइन। यसले हामीलाई २०१२ मा उनको उपस्थितिमा छाडिदियो जुन युनाइटेड किंगडम, लन्डन र २०१ 2012 मा रियो डि जेनेरियोमा आयोजित थियो। ब्राजिल।
स्पेनले भाग लिने खेल र अनुशासन
यस समारोहको खेल प्रतियोगितामा भाग लिने सयौं स्पानियार्डहरू यसमा वितरण हुनेछन् २ sports sports। खेल र बिभिन्न विषयहरूको, जस मध्ये हामी सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्तिहरू फेला पार्न सक्छौं, जस्तै पौडी, साइकल, बास्केटबल, फुटबल, फेंसिंग, व्यायामशाला, जम्पि,, तायक्वान्डो, वाटर पोलो, टेनिस (पनि तालिका), भलिबल, तीरंदाजी र अरू धेरै।
धेरै प्रतिनिधिहरु जसले देशको नाम उचाल्न कोशिस गर्नेछन् उनीहरु मध्ये दामिएन क्विन्टेरो क्यापदेविला र सान्द्रा सान्चेज जैमे (कराटे), स्कार हुसिलोस (एथलेटिक्स), जोन रहम (गोल्फ), पाब्लो अबियन (ब्याडमिन्टन), लौरा बेचेदेजे (कलात्मक), गेब्रियल एस्कोबार (बक्सि)), अल्बर्टो जिनस लोपेज (आरोहण), डेभिड भालेरो सेरानो र जोफ्रे कुल्लेल एस्टापी (साइकलिंग), अल्बर्ट टोरेस बार्सिलो (ट्र्याक), बिएट्रीज फेरेर-सलाट (घोडा चढ्ने - ड्रेसेज) र जेसिका भाल (पौंडी) थप नामहरू।
अघिल्लो ओलम्पिकमा स्पेनले कसरी राम्रो प्रदर्शन गर्यो
रियो दि जेनेरियो ओलम्पिकको अन्तिम संस्करणमा, जुन थियो २०१ 2016, स्पेनले १ 16 पदक जम्मा गर्न सफल भयो, जसमध्ये gold स्वर्ण, silver चाँदी र bron कांस्य थिएयसैले २०१२ भन्दा लन्डन, युनाइटेड किंगडमको भन्दा बढि सफल दिन पूरा गर्दै, यी ओलम्पिकमा पदक तालिका १, पदकहरू मिलेर बनेको थियो भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि; यो किनभने २०१ 2012 को प्रायः सुनको बनाइएको थियो, जबकि युनाइटेड किंगडममा उनीहरूको संख्या 17 मात्र थियो।
उही तरीकाले, स्पेन जहिले पनि ओलम्पिक खेलहरूमा सबै भन्दा धेरै पदकहरू र राम्रो परिणामको साथ एक राष्ट्र बन्न सफल भयो। त्यसकारण, यो आशा गरिन्छ कि यस संस्करणले राम्रोसँग वा अझ राम्रो कार्य गर्दछ। अपेक्षाहरू उच्च छन्, र यो सम्भव छ कि देशको रेकर्ड, जुन २२ ओलम्पिकमा प्राप्त पदकहरू (बार्सिलोनामा १ 22 1992 २ मा भएको हो) रोस्टरले भनेझैं यस वर्षलाई पार गर्न सकिनेछ।
टोकियो २०२० ओलम्पिकमा भाग लिने महान स्पानिश खेलाडीहरू
स्पेन, र अन्य सहभागी देशहरू विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलकुद प्रतियोगिता मध्ये एक भएको कारणले उनीहरूले आफ्ना सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधिहरूलाई कडा लडाई लड्न र ओलम्पिकको गौरवका लागि आमन्त्रित गर्छन्। यद्यपि यस वर्ष स्पेनका धेरै एथलीटहरू र एथलीटहरू छन् जो यो २०२१ जापानको टोकियोमा उपस्थित हुँदैनन्।
तिनीहरू मध्ये केही डिफेंडर समावेश गर्दछ सर्जियो रामोस, जो अब फ्रान्सेली टीम PSG (पेरिस सेन्ट जर्मेन) को हिस्सा हुनुहुन्छ। ऊ ओलम्पिक फुटबल टीममा भाग लिने छैन। न त इ the्ग्रेजी टोली म्यानचेस्टर सिटीका लागि खेल्ने फेरेन टोरेस र सेरी ए (इटालियन फुटबल लिग) रियल म्याड्रिड र रोमाका लागि क्रमशः ब्राम्हिम डाज र बोर्जा मेयरल खेल्ने छन्।
अर्कोतर्फ, स्पेन लयबद्ध जिम्नास्टिक श्रेणीमा क्वालिफाइ गर्न असफल भयो, त्यसैले Inés बरगुआ, अना अर्नाउ, Valeria Márquez र अरू जस्तै पात्रहरू छोडिनेछ। यो यस खेलमा देशको असन्तुष्ट हिस्साको कारण हो।
मारा टोरेस, जो कराटेमा उत्कृष्ट देखिन्छन्, उनी टोकियो पनि जाने छैनन्, सान्ड्रा सान्चेज र दामिएन क्विन्टरो विपरीत, जसले भाग्यपूर्वक स्पेनको तर्फबाट क्वालिफाइ गर्न सफल भए।
ओलम्पिकमा new नयाँ खेल थपिएको छ
सर्फिंग, कराटे, बेसबल / सफ्टबल (यी दुई फिर्ती), खेल आरोहण र स्केटबोर्डि। हामी उनीहरूलाई यस वर्ष टोकियो २०२० ओलम्पिक खेलमा देख्नेछौं। यी अनुमोदन भइसकेका छन् र तसर्थ, धेरै प्रशंसकहरू छन् जुन अब यो संस्करण देख्न इच्छुक छन्, किनभने तिनीहरू विश्वका सबैभन्दा अभ्यास गरिएका गतिविधिहरू हुन्। खेल आरोहणको, जुन अन्य चार उल्लेख गरिएको जस्तो छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » टोक्यो २०२० ओलम्पिक खेल नि: शुल्क कसरी हेर्ने